शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब हुन्छ..!! - IAUA
शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ, यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब हुन्छ..!!
ramkrishna October 13, 2017	यसो गर्नुस् केहि दिनमै मुसा गायब हुन्छ..!!शरीरमा मुसा आएर चिन्तित हुनुहुन्छ
विधि : केही लसुनलाई गाँठोगुठ्ठि भएको ठाउँमा थिचेर राख्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई पट्टिले बाँध्नुहोस् । र यसलाई ३० मिनेटसम्म त्यसै छोड्नुहोस् । त्यसपछि पानीले पखाल्नुहोस् । यस विधिलाई प्रत्येक दिन २ पटक २ हप्तासम्म गर्नाले राम्रो परिणाम मिल्दछ । लसुनले गाँठोगुठ्ठिलाई खटिरामा परिणत गरी १ हप्तामै झार्दछ । सधैं नयाँ लसुनको प्रयोग स्वस्थ छालामा असर नपर्ने गरी गर्नुहोस् ।
Previous Previous post: बिग्रेका बच्चालाई यसरी सुधार्नुस्
Next Next post: तिहारमा नभुल्नुहोस् यी ७ स्थानमा दियो बाल्न